Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Alminum CNC - Shiinaha Alminum CNC Machining Factory
Qaybo ka mid ah Aluminium CNC Milling
Aluminium CNC Qaybaha Wareejinta
EDM Qalabka Mashiinka
Mashiinka Kaarboonka Mashiinka CNC
Ahama Steel CNC Machining
Daawaha Aluminium ee Daawaha
Zinc Alloy dhinta ridaya
Aluminium ku dhufashada
Qaybaha Mashiinka EDM Nidaamka EDM ee aasaasiga ah waa mid aad u fudud oo ah dhimbiil koronto ayaa laga dhex abuuray dhimbilaha korantada oo leh walxaha korantada ku shaqeeya, badanaa waxay khuseysaa qaar ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee adag, caaryada caaga ah, hoosta iyo meel yar, iwm. Awoodda qalabka shaqada waa illaa 16 inji dhumuc, iyo xaglaha taper ilaa 30 + digrii, Waxaan qaban karnaa qaybo ilaa 25.6 "x 16" x 17.75 ″ workpieces. Goynta xariggeena wanaagsan wuxuu soo saari karaa qaabab iyo geeso run ah ilaa .001 ”wi ...
Qaybaha Wareejinta CNC ： Nalalkayaga CNC waxay awood u yeeshaan xawaare sare iyo leexasho tayo sare leh oo ka sameysan caag iyo biro. Nidaamka leexashadu wuxuu u oggolaanayaa joomatari dibedda adag iyo caajis gudaha ah in la soo saaro. Awooddeena leexashada ayaa loo heli karaa hal-mar iyada oo loo marayo soo saarista wax soo saar ee qaybahaaga. Sidoo kale mashiinka isku dhafan-shiidaya oo leh qalab munaarad leh waxqabad sare. Faa'iidada mashiinka wax lagu shiido (1) Soo gaabiyo silsiladda habka wax soo saarka waxsoosaarka iyo hagaajinta waxtarka wax soo saarka. Tur ...
Maxaad noo dooran: 1.Waxaan nahay warshad leh in kabadan 20 sano khibrad makiinada cnc. 2.Qiyaas ahaan 95% wax soo saarkeena ayaa si toos ah loogu dhoofiyaa USA / Canada / Australia / UK / France / Germany / Bulgaria / Poland / Italia / Netherlands… Tayada la hubiyo. 3.Mashiinnada badankood waxaa laga iibsadaa USA iyo Japan sida noocyada HAAS (3-axis, 4-asxis cnc milling machines), Walaal, TSUGAMI (6-mashiin leexasho), Miyano iyo wixii la mid ah. markaa waxaan awoodnaa inaan sameyno qaybo sax ah oo sareeya sida waafaqsan shuruudahaaga dulqaad. 4 ....